December 2019 - Page 3 of 4 - Puntland Mirror Believable Media Website
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda Ahlu Sunna Waljamaaca iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa heshiis ka gaaray arrimaha dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Heshiis ayaa dhigaya in 20 xildhibaan kooxda Ahlu Sunna laga siiyo 89 xubnood ee golaha baarlamaanka […]
December 11, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo afjaray weerar ay Al-Shabaab ku qaaday huteelka SYL ee Muqdisho, sida taliye ku xigeenka booliiska Sakiya Xuseen ay ku sheegtay war-saxaafadeed. “Waxaa ciidamadeena geesiyaasha ah ay […]
December 10, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Xildhibaanada golaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Talaado u codeeyay mooshin ay xubinimada kaga qaadayaan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka, iyagoo ku eedeeyay ku xad gudub dastuurka dowladda Puntland. 38 xildhibaan ayaa soo gudbiyay mooshinka […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ay duqeyn ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ay fuliyeen gudaha Soomaaliya. Duqeynta ayaa Isniintii ka dhacday magaalada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe, waxaana lagu dilay hal dagaalyahan oo […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya aaga degmada Towfiiq ee gobolka Mudug in ay si dhakhso ah u joojiyaan dagaalka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska madaxtooyada habeenimadii Talaadada. […]
December 9, 2019 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa sheegatay dilka labo askari oo katirsanaa ciidamada booliiska Puntland oo ka dhacay magaaada Boosaaso, sida lagu daabacay wakaalada wararka ISIS ee Acmaaq maanta oo Isniin ah. Sheegashadeeda ayaa timid kadib […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah xukun dil ah ku riday nin loo heysto dilka haweenay shacab ah. Cabdullaahi Cali Cumar, oo ah askari katirsan ciidamada xooga dalka ayaa […]
Ku dhawaad 250 geel ah oo ku dhaabtay miyiga gobolka Nugaal oo la baadbaadiyay
Garoowe-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 250 geel ah ayaa laga baadbaadiyay kadib markii ay ku dhaabteen miyiga gobolka Nugaal, sida ay sheegeen masuuliyiinta dowladda iyo dadka deegaanka. Geela ayaa ku dhaabtay deegaanka Libaaxo ee gobolka Nugaal, […]
December 8, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Garoonka diyaaradaha Garoowe ayaa dib u bilaabay howlaha shaqo kadib saacado uu xirnaa dartood roobab mahiigaan ah oo ka da’ayay gobolka. Duulimaadyadii Sabtida ayaa la joojiyay kadib cimilada darteed, sida ay bog wareedka […]
Khasaare kala duwan oo ka dhashay roobab dabaylo wata oo ka da’ay Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Khasaare kala duwan ayaa ka dhashay roobab mahiigaan oo wata dabaylo oo 24-kii saac ee la soo dhaafay ka da’ayay deegaanada Puntland gaar ahaan xeebaha. Gobolka Gaardafuu, hal qof ayaa ku dhintay kadib […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Khamiis ah u safray caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay ilo-wareedyo katirsan dowladda ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Ilo-wareedyada ayaan sheegin ujeedka safarka [...]